Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / Daryeelidda caafimaadka ee dalka Iswiidan
Tani waa qoraalo ka yimi buuga Ku saabsan Iswiidhan Waxaa​d​ soo dejisa​a cu​tubka 7
Cutubkaan waxa ka heli warbixin ku saabsan daryeelka isbitaalada iyo dareelka ilkaha. Adiga waxa xitaa helee warbixin ku saabsan sida caafimaadkaada u wanaaginkartid, tusaale ahaan inaa tababar suubisid iyo cunto wanaagsan cuntid.
Waa maxay caafimaadka? Khamriga, maandooriyayaasha iyo tubaakada Daryeelka caafimaadka iyo bukaanka Iswiidhan La kulanka daryeelka caafimaadka Xaggee la xarireeysaa? Daryeelka ilkaha Haddii aadan ku qanacsanayn Waxaad soo dejisaa cutubka 7